New ZTE Blade 20 Pro: Astaamaha iyo qeexitaannada Androidsis
Qiyaastii saddex toddobaad ka hor waxaan la kulannay shirkadda cusub ee ZTE, taas oo aan ahayn cid kale Daab 20. Mobiladani waxay suuqa u timid sidii mid leh astaamo dhexdhexaad ah iyo tilmaamo farsamo. Hadda, wuxuu yiri terminal wuxuu soo dhaweynayaa walaalkiis ka weyn, kaasoo ah ZTE Blade 20 Pro.
Taleefanka casriga ah ee Pro, oo aan la yaab lahayn, wuxuu soo bandhigayaa sifooyin ka wanaagsan kuwaa oo iyaguna awood badan leh, kuwaas oo inta badan ay wataan processor-ka loo yaqaan Qualcomm Snapdragon 765G. Dabcan, ma joojineyso u ekaanshaha ZTE Blade 20 asalka ah ee heerka bilicsanaanta, laakiin qeybta dambe ee sawir qaadashadu waa wax ka duwan maxaa yeelay waxay leedahay hal shiddeed oo dheeri ah, wax aan si qoto dheer uga hadli doonno xagga hoose.
1 Astaamaha iyo qeexitaanada farsamo ee ZTE Blade 20 Pro 5G cusub
Astaamaha iyo qeexitaanada farsamo ee ZTE Blade 20 Pro 5G cusub
Bilawga, Blade 20 Pro 5G cusub wuxuu leeyahay shaashadda teknolojiyada IPS LCD. Xalka gudigani waa FullHD +.
Hadda macluumaad badan lagama heli karo taleefankan casriga ah. Waxyaabaha qaarkood ayaa ka maqan in laga ogaado. Si kastaba ha noqotee, mobilkaan waxaan ku helnaa Qualcomm's Snapdragon 765G, oo ah sideed-core, iyo kamarad afar geesood ah oo uu hogaaminayo 64 MP oo ah xalka ugu weyn ee dareeraha.
Ugu dambeyntii, ZTE Blade 20 Pro 5G wuxuu la yimaadaa 6GB RAM iyo 128GB oo keyd ah. Waxa kale oo ku jira batari 4.000 Mah ah oo leh awood la mid ah kii ka horreeyay, laakiin ma taageerto lacag-bixinta degdegga ah.
Wali garan mayno qiimaha terminalkan, mana garanayno faahfaahinta helitaanka. Si kastaba ha noqotee, waxaa la filayaa in la iibiyo bisha Diseembar.
MUUQAAL 6.49-inji FullHD + IPS LCD
PRORESOR Snapdragon 765G
GOOBKA BADBAADADA GUDAHA 128 GB lagu ballaarin karo microSD
KAAMARKA DAR Afar laab 64 Xildhibaan
BATARY 4.000 Mah
MUUQAALO KALE Aqoonsiga wajiga / isku xirnaanta 5G
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » ZTE Blade 20 Pro 5G wuxuu si rasmi ah ugu shaqeynayaa kamarad afar geesood ah oo loo yaqaan 'Snapdragon 765G' iyo '64 MP'